Silvia Romano oo "noqotay" safiirka Yurub ee la dirirka Islaam-naceybka
By WARIYAHA ROMA , GAROWE ONLINE
Haweenaydan waxaa Kenya kasoo afduubtay Al-Shabaab kuna haystay Soomaaliya muddo sanad ah.
ROMA, Italy – Silvia Romano, haweenaydii Al-Shabaab kasoo qafaalatay Kenya, mudada sanadka ahna lagu haystay Soomaaliya, ayaa ka qeyb-qaadanaysa mashruuc uu uruka Midowga Yurub kula dagaalamayo Islaam-naceybka.
Jariirada afka dheer ee La Repubblica ayaa talaabadan ku macneeyay in Silvia ay noqontay danjiraha qaarada Yurub ee la dagaalanka Islaam-naceybka.
Haweenaydan ayaa "si aan qasab ahayn" ku Islaamtay mudadii ay lahaystaha ahayd, waxaana ay magaceeda u bedelatay Caa'isha.
Mashruuca ay haweenaydan ka qeyb-qaadaneyso ayaa lagu magacaabaa YES, waxaana laga fulinayaan magaalada ay degan tahay ee Milan.
Ururo kale oo lagu kala magacaabo Fondazione L'Albero della Vita, Le réseau iyo Progetto Aisha ayaa ololahaan kaalin muuqata ka cayaari doona.
Waajibaadkooda ugu weyn ayaa wuxuu yahay in ay soo uruuriyaan macluumaad lagu taageerayo dadka la kulmay dhibaatooyinka faquuqa ku saleysan.
War qoraal ah oo lagu daabacay mid kamid ah ciwaanada Facebook ee ururadaas ayaa lagu sheegay in ay ku faraxsan yihiin la shaqeynta Caa'isha.
"Anagoo ah sideed ruux marka lagu daray Caa'isha waxaan uruurin doonaa kiisaska lasoo wariyo ee Islaam-naceybka iyo tabashooyinka, waxaana taageeri doonaa dhibaneyaasha la kulmay tacadigaas anagoo siin doona garab istaag sharci iyo mid maskaxeed," ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Silvia Romano, 27-sano jir, ayaa dhankeeda la kulantay cunsuriyad badan markii ay dalkeeda dib ugu laabatay. Mas'uuliyiin ayaa kamid ahaa dadka weerarka dhanka baraha bulshadda ku qaadey, wallow ay ka cudur-daarteen.
Baaritaano laga bilaabay hoyga Silvia Romano, talaabooyin la qaadayo
Caalamka 14.05.2020. 11:30
Saynis-yahano ka tirsan hay'addaha ammaanka Talyaaniga ayaa hogaaminaya baaritaanka.
Wargeys: Silvia Romano waxaa lagu soo daayey is-dhaafsi lacag
Soomaliya 11.05.2020. 13:20
Talyaaniga oo go'aan ka qaatay muwaadin "looga haysto" Soomaaliya
Soomaliya 25.12.2019. 19:00
Silvia Romano oo ka sheekeysay qisadii ka dambeysay in ay Islaamto
Caalamka 08.07.2020. 15:00
Silvia Romano oo lagu waramay in ay qaadatay Diinta Islaamka
Soomaliya 11.05.2020. 01:10